प्रदेश3– Pahilo Page
तिरुपति बोर्डिङले मनायो दशौं वाषिर्कोत्सब
२६ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौंको कपनस्थित तिरुपति इंग्लिस बोर्डिङ हाइस्कुलको दशौं वाषिर्कोत्सब तथा अभिभावक दिवस सकिएको छ । विद्यालयको वाषिर्क उत्सव समारोहमा विद्यार्थीहरुले विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरु पस्केका थिए । उनीहरुले लोप हुँदै गरेको विभिन्न जातजातिको नृत्यहरु प्रस्तुत गर्दै पुराना कलाको संरक्षणको सन्देश दिएका थिए । यस्तै कार्यक्रममा विद्यालयको ‘अर्केस्ट्रा ग्रुप’
दुर्घटनामा प्रहरी हबल्दारको मृत्यु
२६ फागुन, विराटनगर । मोटरसाइकल दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका एक प्रहरी हबल्दारको मृत्यु भएको छ । विराटनगरस्थित वडा प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत रामविलास मण्डलको गएराति मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ । विराटनगर–१६ स्थित सडकखण्डमा आफैँले चलाएको को २२ प ९३९६ नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भएर विद्युतीय खम्बामा ठक्कर खाँदा उनी
४० हजार घुससहित प्रहरी इन्सपेक्टर पक्राऊ
२६ फागुन राजविराज । सप्तरीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय कडरवानाका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक प्रेमबहादुर थापा र जवान अशोककुमार यादव घुससहित पक्राउ परेका छन् । उनीहरुले दुर्घटनामा परेको मोटरसाइकल छुटाइदिन्छु भन्दै स्थानीय महमद सागिर अलीसँग ४० हजार रुपैयाँ घुस लिएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पूर्वाञ्चल क्षेत्रिय कार्यालय इटहरीको टोलीले उनीहरुलाई
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य खुलातर्फ कसले कति मत पाए ? (सूचीसहित)
२६ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यको खुलातर्फको मतगणना पार्टी कार्यालय सानेपामा चलिरहेको छ । मत गणनाका लागि प्रोजेक्टर समेत प्रयोग गरिएको छ । २५ केन्द्रीय सदस्यका लागि ९० उम्मेदवार छन् । सबै उम्मेदवारले प्रतिनिधि राख्न पाउनु पर्ने माग गरेपछि निर्वाचन समितिका प्रतिनिधिले मञ्चमा बसेर मतपत्रलाई प्रोजेक्टरमा देखाएर मात्र
४६ इन्सपेक्टरलाई डीएसपीमा बढुवा गर्न सिफारिस
२६ फागुन, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले ४६ इन्सपेक्टरलाई डिएसपीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको छ । बढुवा समितिको मंगलबार बसेको बैठकले ४६ जनालाई डिएसपीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको हो । उक्त सूची प्रहरी प्रधान कार्यालयले बुधबार सार्बजनिक गरेको छ । बढुवा सिफारिसमा परेकाहरुको सूची हेर्नुस् – See more at: http://www.onlinekhabar.com/2016/03/398764/#sthash.4rWM4UO0.dpuf
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यको आरक्षणतर्फको मतगणना भोलि
२६ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यको आरक्षणतर्फको मतगणना भोलि बिहीबारबाट सुरु हुने भएको छ । निर्वाचन समितिका अनुसार पार्टी कार्यालय सानेपामा विहान १० बजेबाट मतगणना हुनेछ । सुरुमा मुस्लिम र दलिततर्फको मतमणना हुनेछ । मुस्लिमतर्फ एक सदस्यका लागि छ जना उम्मेदवार छन् । यस्तै दलितको पुरुष तीन सिटका
विराटनगरमा विकास निर्माणको काम पुनः सुरु
२६ फागुन, विराटनगर । विराटनगर उपमहानगरपालिका क्षेत्रको ढल निकासका लागि निर्माण कार्यले पुनः तिव्रता पाएको छ । भारतको नाकावन्दी र मधेस आन्दोलनका कारण इन्धन लगायतका सामाग्री अभावका कारण निर्माणको काम प्रभावित बनेको थियो । ‘मधेस आन्दोलनको चपेटामा मुलुक नै परेको समयमा हामीले काम रोकेका थियौं । अहिले पुनः कामलाई तिव्रता
सेनापति र मधेसी नेतावीच वाकयुद्धः कमजोरी कसको ?
सिके राउतबारे सेनाले बोल्दा मधेसमा तरंग
२६ फागुन काठमाडौं । राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारी पूर्वरक्षामन्त्री हुन् । भण्डारी सोमबार गृहजिल्ला महोत्तरीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै थिए, जहाँ उनले प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको विरोध गरे । भण्डारीले सेनापतिको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको बताए । पूर्वमन्त्री भण्डारी मात्रै होइन, यतिबेला मधेसी मोर्चाका अन्य नेताहरु पनि नेपाली सेना र